Olee otú mirror Your Android ihuenyo ka PC na Chromecast | Mirror Chromecast
Mirror na emulator
Mirror Android ka PC
Mirror na Chromecast
Mirror Android ka TV
Mirror PC ka TV
Mirror Android ka Android
Ngwa Mirror Android
Android Emulators maka PC
iOS emulator maka Android
3 Ndị ọzọ
Ihe Ọmụma Banyere J5
Dị ka ugboro ọganihu, nkà na ụzụ bụ na mpi na ya na isiokwu a banyere Chromecast ga-agwa gị otú ọ na-arụ ọrụ na otú yiri gị Android ihuenyo ka a PC na Chromecast. Chromecast bụ nnọọ kemfe nkà na ụzụ na ọ ga-abụ a nnukwu akụkụ nke ga-eme n'ọdịnihu. Iji mụtakwuo banyere Chromecast, na-atụ aro Chromecasts, na otú ọ na-arụ ọrụ, na-agụ nke a ọmụma isiokwu.
Bụrụ na ị nwere android ngwaọrụ unu na-achọkwa yiri (òkè) ihuenyo gị PC, a nwere ike mere iji ụfọdụ mfe nzọụkwụ, ma iji mee nke a, o na-adabere na android ngwaọrụ ị nwere ndị na-enye na ị ga-oru ngo ya , ma a TV ma ọ bụ PC. Na-atụ aro Chromecast ka ọ dịrị otú gị android ihuenyo gị PC bụ All nkedo, Koushik Dutta si Mirror na-abịa na kasị android ngwaọrụ ma ọ bụ nwere ike ibudata, na n'ihi na mmadụ na-eji Custom Roms, cyanogen Mod 11 Screencast ike ga-eji. Ọ dị ezigbo mkpa na PC na ga yiri ndị android ngwaọrụ ihuenyo AllCast erite arụnyere n'ihi na nke a software enyere niile atụmatụ nke mirroring ka-nyeere ke ndibọbọ ọgwụgwụ.
Wondershare MirrorGo - Mirror gị android ngwaọrụ gị na kọmputa
Play Android Mobile Games na kọmputa gị na gị keyboard na òké n'ihi na mma akara
Eziga na-enweta ozi na-eji gị computer`s keyboard gụnyere SMS, WhatsApp, Facebook wdg
Ele multiple Ịma Ọkwa n'out oge na-enweghị atụtụ ekwentị gị
Jiri android ngwa ọdịnala na PC gị na maka ihuenyo zuru ahụmahụ
Jikọọ Android ekwentị na MirrorGo
Play Android Mobile Games on PC
Nyefee faịlụ n'etiti PC na Mobile
Atụmatụ & Aghụghọ maka Android Mirror
1. Gịnị ka ọ bụ?
Chromecast bụ ụdị nke nkà na ụzụ ike na mananged site Google, nke na-enyere mmadụ oru ngo ma ọ bụ ngosi ihe ọ bụla ha nwere ha na Android ngwaọrụ ihuenyo on a sekọndrị ihuenyo dị ka a PC ma ọ bụ TV. Ọzọ na-akpali mmasị Chromecast bụ nnọọ obere na ngwaọrụ na nwere ike plugged n'ime a PC HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ekwe ka maka mfe nkedo on a ibu ihuenyo. The ikike a na-akpọ mirroring na ọ bụ nnọọ jupụtara ebe nile na ọha mmadụ taa. Chromecast bụ nnọọ adaba mgbe ụfọdụ n'ihi na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ghara nsogbu na obere mobile ihuenyo ma ọ bụrụ na ha na-ekiri fim ihe atụ nke na-akpọ ha mmasị egwuregwu dị ka FIFA 2015. The nkà na ụzụ nke Chromecast kwere omume n'ihi na nke chrome ngwa n'ihi na ma PC na Android mobile ngwaọrụ ka ụbọchị. Chromecast-enye ohere nkedo nke niile ọkacha mmasị gị mobile-eme ogologo gị PC ihuenyo.
2. The atụmatụ nke Chromecast
• Chromecast-arụ ọrụ na a ọtụtụ nke ngwa - Ọ dịghị mkpa ka nchegbu banyere dị ngwa mgbe ịzụta Chromecast na idebe ya. Ọ na-arụ ọrụ a nnukwu ego nke ngwa, na ị ga-achọ ka enuba na mirror gị nnukwu ihuenyo. Ngwa ọdịnala dị ka Netflix, HBO, Google Music, Youtube, IheartRadio, na Google Play bụ n'ụzọ zuru ezu ike nke na mirroring gị PC hassle free, n'ihi na ọ na-ewe ole na ole nzọụkwụ melite.
• mma ọbụna mgbe ị na-agaghị n'ife - Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị kwesịrị ịkwụsị Nkedo maka a nkeji ole na ole ma ọ bụ nnọọ na ị chọrọ ige ntị ụfọdụ music na zuru ike. I nwere ike ime otú ahụ na ezi ịke n'ihi Chromecast nwere atụmatụ na ike ikwe ka dum ndabere nke gị PC ka-ga na-satellite oyiyi, mara mma artworks ma ọ bụ onye foto gị ọbá akwụkwọ a backdrop ụdị, nke pụtara na dum ndabere ga-ele anya ọgaranya na mara mma na ihe ọ bụla ị na-ahọrọ ọ na-adị.
• Nnweta - Chromecast bụ maka onye ọ bụla dị ka ọ bụ na-ama dakọtara na ọtụtụ narị android ngwaọrụ na ndị mmadụ na ama aka na-eji eme ihe kwa ụbọchị.
• ọnụ - The eri iji Chromecast bụ nnọọ $ 35 nke dị nnọọ ọnụ na echekwa na ọha mmadụ taa. Mgbe ị na-azụ ngwaọrụ ọ bụ gị maka a ndụ.
• Mfe nke ohere na na na ntọlite ​​- Chromecast dị mfe iji, unu niile chọrọ ime bụ ikwunye na Play na-enwe ya ọtụtụ atụmatụ.
• Nchekwa onwe melite - Chromecast akpaghị aka mmelite otú i nwere ike nwere ọhụrụ ngwa ọdịnala na atụmatụ na dakọtara na dị enweghị mgbalị ma ọ bụ hassle.
3. The nzọụkwụ na-esi yiri
Download na na na ntọlite ​​Chromecast na ma ngwaọrụ si play ụlọ ahịa, na play ụlọ ahịa bụ ihe ngwa gị android na ngwaọrụ na enye gị ohere download ọtụtụ narị ndị ọzọ ngwa.
Nkwụnye ahụ chrome tụba HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri nke dị n'akụkụ onwe gị na kọmputa na-eso Mbido ntuziaka na ga-egosipụta na ihuenyo.
Hụ na gị na Chromecast na PC na-na otu netwọk Wi-Fi, nke a ga-eme ka Chromecast na-arụ ọrụ
Mepee akwado Chromecast ngwa na gị ibudatara na ejije ụlọ ahịa na enweta na nkedo button ejikari na n'elu aka nri ma ọ bụ n'akụkụ aka ekpe nke ngwa
4. akwado Android ngwaọrụ
E nwere a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ na-akwado site na Chromecast, ndị a na ngwaọrụ agụnye:
1. Nexus 4+
2. Samsung Cheta Edge
4. Samsung Galaxy Rịba ama 3+
5. HTC One M7 +
8. Sony Xperia Z2 Tablet
9. Nvidia ọta Tablet
11. TrekStor SurfTab xintron m 7.0
5. Advanced Nkedo Atụmatụ
Chromecast nwere ụfọdụ tupu atụmatụ na ọ bụla onye ọrụ kwesịrị maa ịmata na iji dị ka:
• Chromecast ike ga-eji gị na ndị òtù ezinụlọ nke enyi, na-enweghị ha ịnweta gị WiFi netwọk. Otú ị ga-enwe nchegbu banyere hacking n'ime gị Wi-Fi netwọk ahụ mgbe mmadụ na-eji gị Chromecast.
• Chromecast kwekọkwara IOS mobile ngwaọrụ na mbadamba - A otutu mmadụ chọta a mma aka ebe ha nwere IOS ngwaọrụ. Ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe dị ka ndị a na ngwaọrụ ndị Ofụri Esịt dakọtara na Chromecast.
• Ị nwere ike igba a website gị TV si laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka - Advanced atụmatụ nke Chromecast-enye ohere mfe nkedo nke webpages gị laptọọpụ ma ọ bụ ọbụna a telivishọn si a ngwaọrụ mkpanaaka.
Best 20 Adventure Games maka Android
Gịnị mere Ị Chọrọ mirror Your Android ka TV?
Top 10 Pokemon Games maka Android
Best android egwuregwu na 2015
Best 20 Android na-alụ ọgụ Games
> Resource> emulator> Olee otú iji mirror Your Android ihuenyo ka PC na Chromecast